Nantong Wantong သံမဏိပိုက် Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကအပေါငျးတို့သလုပ်သားအင်အား, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အုပ်ချုပ်မှုရှေ့ဆက်ဖောက်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပူပြင်းတဲ့အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးသံမဏိပိုက်;; EMT ပြွန်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်သားအင်အားကောင်းစွာသမာဓိရှိကျွန်တော်တို့ကိုသားအပေါငျးသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိချွတ်အတွင်းမှာပဲဝယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ကျော်လွန်မှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာစီမံခန့်ခွဲမှု welded သံမဏိပိုက်နှင့် သံမဏိ-ပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်ပိုက်; ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံမဏိ; သံမဏိပန်းကန်အသားတင်; ငြမ်းအမျိုးမျိုးတို့ကို (50 ကျော်မျိုးလုံးဝ3စီးရီး) နှင့်စိုက်ပျိုးရေးဖန်လုံအိမ်ပြည့်စုံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထုတ်ကုန်။
ကျနော်တို့ကအမြဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပေါ်မှာငါတို့စျေးကွက်-အခြေစိုက်စခန်းမှထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အဖြစ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်. အပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆို။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်များအများအပြားရှိပါတယ်။ သူတို့တွင်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ steel-plastic composite pipe. Our production of scaffolding is identified as the highest quality QC inspection passed product ranking as one of the "highest in demand-quality products of Jiangsu Province",It serves as an intellectual property protection units in Jiangsu. Jiangsu TV-Press has madeaspecial documentary report stating its advantages and benefits towards environmental friendly.